အမေဇုံဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုကျော် hoverboards ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ - သတင်း Rule
အမေဇုံဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုကျော် hoverboards ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အမေဇုံဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုကျော် hoverboards ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့” အဲလက်စ် Hern ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 14 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2015 09.07 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အမေဇုံကို Self-ဟန်ချက်ညီဆိုင်ကယ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မီးလောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်မှုပြီးနောက်ရောင်းချခြင်းမှအချို့သော hoverboards ဆွဲထုတ်ဖို့စတင်နေပြီ.
အမေဇုံတွင်ရောင်းချခဲ့ hoverboards တစ်အရေအတွက်ယခုပျောက်ကွယ်သွားပြီ, အပါအဝင် တခါစားသုံးသူရေးရာဆိုက်အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်အားလုံးငါးယောက်မော်ဒယ်များ BestReviews. ဒါကဆိုက်ယခုကာလဘို့ဖြစ်ခြင်းက "-လိမ့်မည်ဝယ်လက်သတိပေး, သူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်သက်သေပြမှီတိုင်အောင်ကြှနျုပျတို့သညျ "ဆို hoverboards အကြံပြုကြသည်မဟုတ်.
တဦးတည်း hoverboard ရောင်းချသူအဆိုအရ, Swagway, အွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်ထုတ်လုပ်သူလိုအပ်ခဲ့သည် သူတို့၏မော်တော်ယာဉ်များကို "သက်ဆိုင်သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူညီနေကြတယ်" ဟုသက်သေစာရွက်စာတမ်းများပေး, ထိုယူနစ်များအတွက်ဘက်ထရီနဲ့အားသွင်းအပေါ်အထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်နှင့်အတူ.
နောက်ဆုံးခရစ္စမတ် '' မဖြစ်မနေ-ရှိအီလက်ထရောနစ်ဆုကြေးဇူးကိုလိုပဲ, selfie တုတ်, အများဆုံး hoverboards အလှကုန် retouching နှင့်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်ထားသူအနေဖြင့်ပြန်လည်ရောင်းချသူများအမြောက်အများအတွက်ဝယ်ယူမခံရမီတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာအမြောက်အများထုတ်လုပ်နေကြတယ်. selfie တုတ်မတူဘဲ, သို့သော်, hoverboards ကြီးများဘက်ထရီမဆံ့, သောသူတို့ misfire လျှင်လေးနက်သောအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်.
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က, တစ်ဦး hoverboard ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်အတွက်စျေးဝယ်ကုန်တိုက်ထဲမှာပေါက်ကွဲ, ထိတ်လန့်သို့စျေးဝယ်ပေးပို့ခြင်း. အဘယ်သူမျှမထိခိုက်ခဲ့ပေမယ့်, ပေါက်ကွဲမှုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်လုပ်.
ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းတွင်အတွက်, ဗြိတိန်ရဲ့ကုန်သွယ်စံချိန်စံညွှန်းများအခွင့်အာဏာကိုသတိထားဖို့ဝယ်လက်သတိပေးခဲ့သည်, နှင့် ကြောင်းထင်ရှား 88% အီးယူပြင်ပကနေတင်သွင်းထို hoverboards ၏, ကစမျးသပျခဲ့ကွောငျး, အခြေခံပညာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများပျက်ကွက်ခဲ့.
ထိုအချိန်မှာ, လီယွန် Livermore, အ Chartered ဘဏ်ဟာထရေးဒင်းစံဌာန Institute ၏အမှုဆောင်ချုပ်, ကပြောပါတယ်: "ရာဇဝတ်သားများနှင့်တာဝန်မဲ့ထုတ်လုပ်သူမကြာခဏမြင့်မားဝယ်လိုအား exploit နှင့်စျေးပေါနှင့်အန္တရာယ်ရှိကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူစျေးကွက်ရေလွှမ်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. ပြည်ပမှာလုပ်ကြသည်တချို့ကထုတ်ကုန်, အဓိကပြည်ပစျေးကွက်အတွက်, ဗြိတိန်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်မှန်ကန်သော plug ကိုနှင့်ဖျူးနှင့်အတူတပ်ဆင်ကြသည်မဟုတ်. နိမ့်ဆုံးအဖြစ်, စားသုံးသူများအကိရိယာပေါ်တွင်သုံး-pin ကို plug ကိုက BS1363 စေသည်ဤသို့ဖော်ပြသည်ကြောင်းစစ်ဆေးသင့်. ဒါကြောင့်ဤအချက်အလက်မပါဝင်ပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်ထုတ်ကုန်မဝယ်ကြဘူး။ "
ဝယ်လက်လည်းသူတို့တစ်တွေ hoverboard သုံးပြီး၏တရားဝင်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်သေချာအောင်သင့်တယ်, သောတရားဝင် UK ရှိကျောက်ခင်းရှေ့တွင်သို့မဟုတ်လမျးခရီးအပေါ်စီးမရနိုငျ.
နာမတျောအနေသော်လည်း, hoverboards အမှန်တကယ်ရထားဘီးပေါ်တွင်မြေပြင်အနှံ့လှိမ့်.
35875	0 ဒေးဗစ်ကင်မရွန်, ဥရောပ, ဥရောပသမဂ္ဂ, ပြင်သစ်, ပြင်သစ်ဘာသာစကား, Getty Images, Philip Hammond, ဆီးရီးယား, အုပ်ထိန်းသူ, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
← ဘယ်လိုအဘယျသို့ကျွန်တော်ဝတ်ဆင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုထိခိုက် အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 25-21 →